कागती सेवन गर्नुहुन्छ ? स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ कागती – Mukundasen Television
कागती सेवन गर्नुहुन्छ ? स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ कागती
| ११ आश्विन २०७७, आईतवार १२:१९ , प्रकाशीत
असोज ११ , काठमाडौं
हाम्रो घर वरीपरी र बजारमा कागती सजिलै पाइन्छ । स्वादमा अमिलो हुने कागतीमा प्रशस्त भिटामिन ‘सी’ पाइन्छ । धेरै मानिसले बिहान उठ्ने बित्तिकै तातो पानीममा कागती हालेर खाने गर्छन् । यसको सेवन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक मानिन्छ । तर कुनै बेला कागती शरिरको लागि बेफाइदा पनि हुन्छ ।
अम्लीय तत्व हुने कागतीको धेरै सेवन गरेमा विष सरह पनि हुन सक्छ । त्यसैले कागती धेरै सेवन पनि गर्नुहुँदैन । यदि तपाइको पेटमा कुनै समस्या छ भने कागती सेवन नगर्नुहोस् । यस्तो बेला कागती सेवन गरेमा झन पेटमा समस्या हुन्छ । यदि तपाइले अनुहारको दागधब्बा र डण्डीफोरको उपचारको लागि कागती प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, भने पनि बिशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
महामारीमा अब्बल सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा
भारतमा आगामी शनिबारदेखि ३० करोड जनतालाई कोरोना खोप लगाउने अभियान सुरु !!
निको भएको ६ महिनापछि पनि अझै देखिँदैछन् कोभिड– १९ का असरहरु